Ama-Peps Coir Matress ngamanani aphelele | Rayson
Ngemuva kweminyaka yentuthuko eqinile futhi esheshayo, iRayyson ikhule yaba yinye yamabhizinisi anobungcweti kakhulu futhi anethonya eChina. Ama-Peps Coir Coir anikele kakhulu ekuthuthukisweni komkhiqizo kanye nokwenza ngcono kwekhwalithi yesevisi, sesisungule idumela eliphakeme ezimakethe. Sithembisa ukuhlinzeka wonke amakhasimende emhlabeni wonke ngensizakalo esheshayo nezobuchwepheshe emboza ukuthengisa kwangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa, nangemva kokuthengisa. Akunandaba ukuthi ukuphi noma yiliphi ibhizinisi olibandakanyekile kulo, sithanda ukukusiza ubhekane nanoma yiluphi udaba. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi ngomkhiqizo wethu omusha we-PEPTS COIR Matress noma inkampani yethu, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.Lulky Product, enikeza induduzo eyanele yokuthi abantu bayigqoke ubusuku nemini ube nokungezwani kwesikhumba.